9 (2009) Unicode 9.9.2009 . . .9ရကျ9လ 2009 ခုနှဈနမှေ့ာထှကျရှိခဲ့တဲ့9ဆိုတဲ့ Animation ဇာတျကားလေးကို ဒီနအေ့တှကျ တငျပေးလိုကျပါပွီ။ ဒီဇာတျကားလေးဟာ IMDb rating 7.1/10 အထိရရှိထားပွီး . Animation ကွိုကျတဲ့ ပရိတျသကျကွီးအတှကျ စိတျကနြေပျမှုအပွညျ့အဝရရှိစမေယျဆိုတာ ရဲရဲကွီးပွောခငျြ ပါတယျ။ ဇာတျလမျးရဲ့အကွောငျးအရာ အကဉျြးကိုမပွောပွတာက ကောငျးလှနျးတဲ့အတှကျ ပရိတျသကျကွီးကို spoiler အဖွဈမခံဘဲ ကိုယျတိုငျခံစားကွညျ့ရှုစခေငျြလို့ပါ။ ဒါရိုကျတာ Shane Acker ဖနျတီးထားပွီး အသံပိုငျးဆိုငျရာ သရုပျဆောငျတှကေလညျး ဇာတျလမျးရဲ့ အနှဈသာရထဲကတဈခုအပါအဝငျပါဘဲ။ဒီဇာတျကားလေးရဲ့နာမညျပေးထားတာက9. ဇာတျကောငျအကောငျလေးတှအေရအေတှကျက9. ထုတျလုတျတဲ့ Date ကလညျး 9.9.09 . ထူးခွားမှုလေးတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့9Animation . . . Credit Review Zawgyi 9.9.2009 . ...
IMDB: 7.1/10 125,555 votes
Underworld: Rise of the Lycans (2009) ဒုတိယကားမှာလဲ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုကို သောက်သောက်လဲ ရရှိခဲ့တဲ့ Underworld ဟာ ဒုတိယကား ထွက်ရှိပြီးနောက် ၃နှစ်အကြာ မှာ တတိယကား ကိုထပ်မံရိုက်ကူးခဲ့ပြန်ပါတယ် တတိယကားမှာလည်း ဒုတိယကားကိုပြန်လည် ဇာတ်လမ်းဆက်ထားပြီး ဒုတိယ ကားရဲ့ အဆက် လိုင်ကန်တွေရဲ့ သမိုိင်းရာဇ၀င်နဲ့ ဗန်ပိုင်းယားတို့ရဲ့ Slave တွေအကြား ပဋိပက္ခတွေနဲ့သန့်စင်တဲ့ သွေးရဲ့ မူလအစမျိုးဆက်ကို လိုက်လံဖော်ထုပ်ကြပြီးအမှောင်ခေတ်တွေမှာ လိုင်ကန်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် လူစီ ဟာဦးဆောင်ပြီး သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးဗစ်တာ ကို တော်လှန်ပုံကန်ပါတော့တယ်အဲ့ကြားမှာ ဆယ်လီ တယောက် ဘယ်လိုများ ၀င်ရောက်ကြားညှပ်မိမလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါတော့နော် Credit Review Translated By Wanna Ko Ko
IMDB: 6.6/10 141,727 votes
Fast & Furious (2009) Fast and the Furious ဇာတ်ကားတွေရဲ့ လေးကားမြောက်ပါ။ ဒီကားကတော့ ကားပြိုင်တာထက် Action ပိုင်းတွေပိုမိုပါဝင်လာပြီး ကြည့်ကောင်းနေဆဲဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Quality ကောင်းကောင်း ပြန်ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။